पोखरामा बे’खर्ची भएका पारसले जव म्यानेजरलाई मु’क्का ब’र्सा’ए
Homeसमाचारपोखरामा बे’खर्ची भएका पारसले जव म्यानेजरलाई मु’क्का ब’र्सा’ए
October 17, 2020 admin समाचार 8224
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका बाल’सखा प्रभाकर राणा’लाई जब पारसको खबरले झ’स्का’यो, तब उनी स्त’व्ध भए । प्रभा’करले सोचे&का थिएनन्, पारस अहिले पनि को’हीमाथि जा’इ’लाग्छन् ।
घटना पोहो’रकै हो । पूर्वयुवराज पा’रसलाई पोख’रामा पैसाले साह्रै मुस्किल भएपछि बाबु ज्ञानेन्द्र’लाई फोन गरे । उनले साथी प्रभाकरलाई फोन गर्न भने’अनुसार पारसले त्यसै गरे । पारसले आफूलाई बुबाले फोन गर्न भनेको कुरा सुना’उनेबित्तिकै यताबाट प्रभाक’रले भने, ‘सरकार फिस्टेल लज’मा सवारी होस्, मैले त्यहाँ भनिदिएको छु ।’
फोन’मा यति–उति पैसा भन्ने तय भएको थिएन, पारसले पनि सोधेनन् । सीधै लेकसाइडस्थित फिस्टेल लजको काउन्टरमा पुगे । त्यहाँ थिए, म्यानेजर । पा’रसलाई देख्नेबि’त्तिकै उनले एउटा काग’जमा बे’रे’र राखिएको मु’ठो दिए ।
पा’रसले कागज खोलेर हेरे, एक–एक ला’खको दुईवटा गड्डी देख्नासाथ मुख बिगारे । अनि, आफू’माथि अ’प’मा’न भएको भन्दै म्यानेज’रलाई मु क्का ब’र्सा’उन थाले । उनको नाकबाट र ग त बग्यो । पारस पैसा त्यहीँ फ्याँ’के’र निस्किए ।
अनि, म्याने’जरले प्रभाकरलाई फोनमा यस्तो घटना सुनाए । सुन्नासा’थ प्रभाकरले मुख बिगारे, तर जवाफ दिएनन् । किनभने, उनले फोन रिसिभ गरिरहँदा अगाडि पञ्चा’यतकालिन दुई जना मन्त्री थिए । त्यसप’छि प्रभा’कर केही पर, एकान्तमा पुगे ।
लगभग १०–१५ मीनेट को’हीसँग फोनमा कुरा गरेर साथीहरू भएको ठाउँमा फर्किए । त्यसबेला’सम्म पनि उनको अनुहार रा’म्रोसँग खुल्न सकेको थिएन । त्यहाँ बस्नेह’रूको अनुमान थियो– कि त प्रभाकरले ज्ञानेन्द्र’लाई फोन गरेर पार’सको ह’र्क’तबारे सुनाए । कि, फेरि फिस्टे’लमा फोन गरेर पा’रसले भनेजति पैसा दिन लगा’ए । -खबरहब बाट
करीनाले सैफको प्रपोज दुईपटक अस्वीकार गरेकी थिइन्,किन?
March 10, 2021 admin समाचार 3904
रमेश प्रसाईकी श्रीमती नन्दाले बेहुली बनेर भेटिन अन्जु पन्त, अन्जुको गीतले रोइन (भिडियो हेर्नुहोस्)
December 29, 2020 admin समाचार 5123
नेपाली सुगम सं’गीतकि सबैकी प्रिय गायिका अन्जु पन्त रमेश प्रसाईकि श्रीमतीको आ’श्रम पुगेकी छिन। केहि सहयोग लिएर आश्रम पुगेकी अन्जु पन्तलाइ स्वा’गत गर्न आएकी नन्दा निकै भाबुक भइन अन्जुले पनि आफ्नो पिडा सुना’उदै बिगतमा पनि
August 2, 2020 Administer Banner Post, समाचार 85406
digital tendencies live recently welcomed Lauren abettor, the head of artefact and marketing for Jobbatical, which fits foreign tech worker’s with organizations from all over the place the realm. “there’s reallyaability shortage in
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (206325)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (205977)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (201082)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (193434)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (170200)